Kuwo lo nyaka, sikunikeza eziningi izipho ehlukile ngenxa yezizathu ezihlukahlukene. Ukukhetha ukuphana izipho futhi ukunika awunakuthokoza esingaphansi ukuzithola. Kukhona nezikhumbuzo eziningana lapho kumele ukhethe izipho ekhethekile empilweni wonke umuntu. Lezi zihlanganisa umshado, ukuzalwa komntwana kanye nemigubho. Ngakho kufanele sicabange ngalo, babe epha umngane iminyaka engu-20.
Uma umuntu eminyakeni embalwa wazi ukuthi ngempela kalula guided ezokuzilibazisa, izintandokazi izifiso. Engingakusho nje nje ngaphambi iholide ukubuza imibuzo embalwa phambili ukwenzela ukunquma ukuthi ukunikeza umngane wakhe iminyaka engu-20. Ukukhetha kakhulu inquma ubunjalo kothandekayo. Phela elisizungezile ukwehluka kwemibono nezinketho ukuthi "dazzled".
Yini ukunikeza umngane wakhe iminyaka engu-20 ochungechungeni "imizwa"? Perfect okubhaliselwe ebhayisikobho, umphakathi Philharmonic, uchungechunge nemibukiso. Uma intombazane abanesibindi ngokwanele, ngeke ushiye abangasoze balukhohlwa umbono paragliding, Ballooning, noma Bungee Jumping. Ngesikhathi sasehlobo, okuvelayo ezinjalo ingatholakala ku izivakashi izinkambo kakhulu edolobheni. Nje kwezinsuku ezimbalwa ngesonto, okuyiwona yena wathola eziningi imizwelo ahlukahlukene. Climbing, iculo emhlabeni komlilo, ebusuku etendeni nokuzijabulisa imisebenzi - yini kangcono?
Yini ukunikeza umngane wakhe iminyaka engu-20 ochungechungeni "Fluffy futhi funny"? Mhlawumbe sekuyisikhathi eside yena ngiphuphe puppy zamanzi, ama hamsters, izinhlanzi noma zopholi. Ingabe unayo ithuba elikhulu ukufeza iphupho zaziswe. Fluffy ibhola lokuzalwa kuyohlale kusikhumbuza ngawe. Futhi ukunakekela nokudla izinto ungaya ndawonye.
Yini ukunikeza ngoba usuku lokuzalwa umngane wakhe nge amancoko? Yena ayithandi uvuka ngesikhathi ekuseni ngasekupheleni ngakho ngoba emsebenzini noma esikoleni? Khona-ke isipho ephelele iba alamu runaway iwashi enamasondo. Ashukumisa isikhathi isethi, iqala beeping kanye roll phezu nightstand. Ngakho kufanele ukugibela nokwehla embhedeni ukuze uyicime, ziphuma ngesitulo, closet, embhedeni noma enye indawo lapho uye isikhathi beye.
A omkhulu isipho inketho kuyoba ukukhanya, udala besibhakabhaka esinezinkanyezi egumbini. Izinkanyezi ophahleni nezindonga egumbini usethe isimo romantic. Uma intombazane ungumthandi gizmos esihle-ke yamnika umkhiqizo eyenziwe yokunyathelisa esibukweni. Ngesandla ngesineke usilika isikhafu ngeke izingcweti oncomekayo umhlobiso timphahla tekubhukusha.
Ukuqoqa izithombe izikhathi ujabule, ngilandisa ubungane bakho, bese wenza ikhalenda edeskini. Kuwo wonke unyaka, umngane bayojabulela izithombe amahle ukushaja nabo imizwelo eyakhayo.
Kuzoba isipho isitifiketi ezinhle esitolo ozithandayo noma ubuhle salon. Sebenzisa intombi yakhe ayengakwenza uwedwa. Uma intombazane ungeke ucabange ukuphila kwami konke ngaphandle ikhofi, inketho ekahle kungaba iqoqo isipho, esakhiwa Turk noma yesimanje ikhofi umenzi futhi Deluxe ukushicilelwa Culinary, etshela mayelana nezikhathi ezithakazelisayo emlandweni walesi siphuzo emangalisayo futhi izindlela sokulungiselela yayo.
Nikeza umngane sicu isithombe futhi ukunikeza ithuba sengathi imodeli odumile we omagazini ecwebezelayo. A professional photographer izogcizelela zonke izinzuzo yala mantombazane, futhi ngisho ukusiza ukuthola facets entsha ukubukeka kwakhe, elaliyoba isimanga.
lokuzalwa Izipho intombi sika kungaba noma ikuphi. Kodwa kumele kahle ezipakishiwe wengeze izimbali. emaphaketheni enhle nge nenhle umnsalo isixha kanti iphunga kuzodala isimo zemikhosi futhi uyonika extra kwamaminithi ambalwa okuthakazelisayo. Isipho umhlobiso kungenziwa ngokuzimela noma ochwepheshe maphakathi emaphaketheni.
Inkukhu coops izinkukhu ngesikhathi 10: imidwebo, amaphrojekthi. Kanjani ukwakha ngehhoko inkukhu for 10 izinkukhu?